Yakha ukufudumala kunye nentuthuzelo endlwini, ujonge imikhosi kunye neendwendwe, ukugxininisa "ubuso" ngamnye kwigumbi kuya kunceda izinto esizibambelayo ngezinye iinkcukacha okanye singazihoxisi. Asikwazi ukukwazi ukulungiswa rhoqo xa sifuna ukuvuselela okanye ukulungiswa kwangaphakathi. Ikamelo ngalinye linalo "izinto eziphakamileyo". Ungayitshintsha njani indlu yangaphakathi ngoncedo lwezinto ezingathembekiyo? Siza kufumana namhlanje!
Igumbi lokulala. Ingqungquthela kunye nombala wabahlobo akunjalo, njengoko besithi. Omnye uthanda ukufumana umoya ozolileyo nokuzolile egumbini lokulala, ebusuku; Abanye, ngokuchaseneyo, bangela ukuvuya kwemihlali kule gumbi ukuze kuvuke lula ekuseni. Eyona ndawo "yemozulu" kunye nomgangatho wale gumbi kusekwe ngamakhethini, baya kunceda ukutshintsha ingaphakathi. Kuxhomekeka kubo impembelelo jikelele yegumbi lokulala. Ingaba ngumkhusane wokukhanya, oqokelelwe ngoncedo lwamagnetha ngendlela engummangaliso; amakhethini anzima kakhulu, angavumeli ukukhanya, mhlawumbi kunye nekhethini kwisitayela saseTshayina. Kwigumbi lokulala, ngokungabikho kwelinye igumbi, izibane nezibane zomgangatho zifanelekile. Ephakamileyo okanye ephantsi, umgangatho, udonga okanye itafile, imilo eyahlukeneyo nemibala. Ukutshintsha kuphela iipaleni nezibane, ungatshintsha imeko yegumbi rhoqo. Enye inkcazelo eye yaziwa kakhulu ekufuyweni i-aquarium egumbini lokulala. Ukuqhuma kwamabhulebhu emoyeni emanzini, ukukhanya kwayo okungapheliyo, ukunyuka kwezityalo zaselwandle kunye neentlanzi ngokukhawuleza-konke oku kunika ukuphumla nokulala. Kwakhona, i-aquarium iphambise kakuhle igumbi, eluncedo kakhulu kwesikhumba, iinwele kunye ngokubanzi kwimpilo. Kwaye enye ingcamango-umdlalo wokubeka igumbi lokubhinqa iingubo zokutshintsha iimpahla, ngoku iyakhathazeka kakhulu, kwaye ayifanele ihambelane nesitayela esiqhelekileyo kwigumbi. Iimpawu ezintle: ikhandlela, izibane, iifestile, iifoto kunye nemifanekiso kwiimpahla ezihle, izibane zephunga, izibhanki ze-piggy, ezilwanyana ezithambileyo, iifayile nazo zinceda "ukuvuselela" ngaphakathi.
IHolo, igumbi lokuhlala. Ukuba igumbi lokulala lisondele kakhulu, ke kule gumbi sivame ukufumana iindwendwe, ukulungiselela iiholide, ukudlala nabantwana kwaye uphumule emva komsebenzi wosuku olulukhuni, ngoko iholo kufuneka likholise iliso kwaye lukhululekile. Nantsi yonke into incike kuphela kwiingcamango kunye neengcamango zabanini bendlu. Ziziphi izinto ezilula ongazitshintsha imozulu apha endlwini? Iholide kwisitayela se-Art Nouveau okanye i-avant-garde inokuyihobisa itafile yeglasi ephantsi yohlobo lwangxangxantathu kunye nelitye elifanayo phantsi kweTV; amakhethini aphakanyisiweyo okanye aqokelelweyo (iiTshayina); Iibhola ze-straw-iibhola, izihlalo zemilo yejometri, i-pear-pear. Igumbi lokuhlala kwisitayela seklasi lizaliswe ngamadaka e-satin kunye nemilenze eqoshiwe, iintyatyambo eziqingqiweyo zimi, iindalini ezinzima ezinamacandelo amaninzi, ezihlotshiswe ngamabhulebhu, izityalo zephantsi okanye izityalo ezinobumba obukhulu kakhulu, izikhumba zezilwanyana phantsi kunye nefenitshala ephakanyisiweyo. Ngendlela, unokwazi ukubeka isikhumba esikhanyayo kwigumbi lokulala phantsi kombhede. Igumbi lohlobo lwe-rustic luya kuhlotshiswa ngefenitshala yensimbi, zonke iintlobo zeengubo (i-plain okanye isikwere), amaphephandaba amaphepha, amaphephancwadi anemifanekiso, ama-rug matshatiweyo, amaqabunga amacwecwe anokuzibamba. Isitayela sase-Asiya sincediswa izibane ezibomvu, iifenti ezinkulu kwiindonga, iiplati okanye iifestile eziphambene nezicathulo, i-bamboo, iindawo zokuqhumisela, iipaneli zamehlo, zibeka i-sushi. E-Asia, indlela yaseJapan ithandwa ngoku ngoku kwaye izitolo zinika ukhetho olukhulu lwezinto ezingancedisa ngaphakathi.
Ikhitshi. Njengomthetho, abasetyhini bachitha ixesha elininzi ekhitshini kwaye yonke iindlosokazi zamaphupha ekhitshi elihle kakhulu, apho kwakumnandi ukuba. Ngokuqhelekileyo, ngenxa yazo zonke iintlobo zezinto ezisetyenziswayo kunye neekhabhinethi ekhitshini, kukho indawo encinane kakhulu, ngoko ke le gumbi kubalulekile ukuba "ungadluli". Ukuba ifenitshala yekhitshi ikhona i-shelf evulekileyo yezinto ezincinci, ziyakwazi ukubeka iibhotile zokuhlobisa kunye nemifuno enemibala, zonke iintlobo zemifanekiso, amakholeji. Ukuba akukho zikhonkwane ezinjalo kwiikhabhinethi, ngoko udonga olungenalutho lunokuphoswa kunye neebini zetyulofu ezincinci, ngokutsho kwesitayela ehambelana nolwalathiso olubanzi lwangaphakathi kunye nokubeka zonke izinto ezincinci apho. Zingenziwa ngeglasi ebalawuli okanye ngamaplanga. Ephakathi kwetafile yokutya ubeke iplate yeqhamo, unakho ukuvelisa okanye utywala ngeentyatyambo. Kwakhona, itafile iya kuhlotshiswa nge-peppermint eyonwabileyo, i-shaker shaker kunye ne-napkin, i-napkins nganye ekhonjiweyo phantsi kokutshisa, njl. Udonga olukhululekile luya kugcwaliswa ngamehlo kunye nepeyinti. Amakhontanga ekhishini angcono ukuba abe neentlobo ezahlukeneyo kunye nemibala, apha unako ukunika inkululeko yokucinga.
Iofisi. Kwiminyaka yakutshanje igumbi elilodwa lomsebenzi liye lavela kwiiRashiya zamagumbi ahlukeneyo kwigumbi kunye nezindlu zangasese, ezifana namagumbi okusebenzela aseNtshona. Eli gumbi kufuneka libekwe emsebenzini, ngoko ungongezi nantoni na eyongezelelweyo, ukuphazamisa ingqalelo. Kodwa iinkcukacha ezimbalwa zisenokufumaneka. Okokuqala, eofisini, iintlanganiso zenziwa kunye noogxa emsebenzini okanye abantu abangafanelanga ukubetha ebusweni nobuncwane, ngoko kuyafaneleka ukubeka izinto ezibizwa ngokuba yimeko yesimo: incwadi esayinwe ngumlobi odumileyo; I-CD yomsindo, kunye ne-autograph yomculi; izinto zobugcisa eziyingqayizivele, izinto zokudweba, imifanekiso, njl. Iindonga zinokuhlobisa izatifikethi nezatifikethi ezibonisa impumelelo yakho yobugcisa. Zonke ezi ngileyo ziyakuthintela umbono wabanini bendlu. Ukuphakamisa imizwa, unokuyihobisa iindonga ngemidwebo yabantwana kunye neefoto zazo. Musa ukuyihoxisa izityalo zangaphakathi, ziya kudala iofisi eofisi kwaye ngexesha elifanayo lihlambulule emoyeni kwimiphumo emibi yezixhobo zeofisi.
Iholo lokungena. Kwibala, kunomdla wokubetha ukukhanya. Kwinqanaba elincinci, ezi zibanezibane ezifanisa izibane ezibekwe kwiindonga zombini ngokuhleleka; uchungechunge lwebhola-iibhola ezincinci kumanqanaba obude obuhlukeneyo obuqhekekileyo phezu kwelayili; ezakhiwe ezindongeni okanye ekufakweni kwezibane ezincinci. Kulo udonga unako ukuxhoma umshicileli wokhuni onomdla. Ukuba akukho ndawo eyaneleyo, kuya kubakho izinto ezimbini ezaneleyo ukuvuselela igumbi. Inokuthi: i-hanger egxininci okanye i-vase-pot yangaphandle kunye nomkhiwane okanye i-dracaena; umnxeba owenziwe ngomdala kunye nomququ omncinci; iwashi yangaphandle.
Akunandaba nokuba yintoni ubungakanani kunye nokuya kuyo igumbi, kungakhathaliseki ukuba yintoni umbala kunye nokubunjwa kwephepha lodonga, okanye luhlobo luni lwesakhiwo kunye nefenitshala. Iinkcukacha zibeka ithoni kuyo yonke ingaphakathi egumbini, elona lilungeleke kakhulu, uninzi lwezinto ezibuhlungu, ziyakususwa kalula ukusuka kwigumbi ukuya kwelinye, ngokuqinisekileyo, azibophekanga kwaye ziyakushintshwa kwimeko. Khumbula, into yangaphakathi endlwini yindiza yakho!
Isitayela saseJamani esiyimbali, yangaphakathi
Ngaphakathi kwendawo yokuhlala, isitayela saseNgesi
Senza igumbi lokugqoka ngezandla zethu
I-Stew kwiimbiza - iresiphi yokutya kweNtsha entsha
Iingxaki zabantwana kwintsapho enkulu
Izindlela zokulwa nokuloyiko lokunxibelelana
Isobho se-Lentil kunye nenyama
Isithethe sokunikela izandla neentliziyo
U-Yulia Vysotskaya watsho malunga nombuso wentombi yakhe
Yintoni oyenzayo ngexesha lakho lokukhulula